Nayakhabar.com: नारायणकाजी श्रेष्ठ कनि हानिए चीन ?
नारायणकाजी श्रेष्ठ कनि हानिए चीन ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतबाट फर्केलगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन प्रस्थान गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा नेता श्रेष्ठ मंगलबार बिहान चीन प्रस्थान गरेका हुन् ।
भ्रमणका क्रममा श्रेष्ठले चिनका विभिन्न राजनीतिक भेट हुन सक्ने उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । माओवादी भित्रका प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिएका श्रेष्ठ प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भारतमा भेटेर फर्के लगतै चिन जानुले चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका विषयमा समेत ठोस धारण बाहिर आउने बुझिएको छ ।
यसैबीच चिनियाँ सरकारको निमन्त्रणमा तिब्बत, कैलास तथा मानसरोबरको दर्शन–अवलोकन भ्रमणमा गएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
भ्रमणका क्रममा थापाले तिब्बतका स्थानीय नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको केन्द्रीय सदस्य तथा थापाका सञ्चार सहयोगी राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए । थापा पाँच दिनअघि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।